Yaadannoo Guyyaa Gootota fi Galgala Bashananna Oromoo (Ebla 20, 2013)
Nagaan kabajaa Oromummaa hundumaa haa dursu.
TBOJ dameen Munshin April /Ebla/ 20, 2013 yaadannoo Guyyaa Gootota Oromoo sa’aa 14:00 irra eegale bifa addaan ayyaaneffatee ooluuf qophii guddaarra waan jiruuf guyyaa kana waliin dabarsinuuf isin afeerreerra.
Goototi Oromoo mirga keenya humnaan nu jala sarbame bakkatti nuu deebisuuf jecha jijjiirraa kan hinqabne lubbuu isaanii bifa adda addaan dabarsani gaggahamani jiru, yeroo amma kanas kun itti fufe argama. Kunis Biyya Tokko – Oromiyaa;Saba Tokko – Oromoo; Hiree Tokko – Oromiyaa bilisoomte argamsiisuuf jechadhaa. Haa ta’uu malee kaayyoo isaan itti kufanii fixxan baasuun dirqama saba fi ilman Oromooti.
Kanaafu yeroo guyyaa goototi keenya itti wareegaman kana akka yaadanu walin akka yaadannu waammicha miseensoota keessani nu dabarsitani argamitanu fi qooda fudhatanu kabajjaa walin afeera keenya isini dabarsina.
Guyyaa: April/Ebla 20, 2013
Yeroo sa’aa 14:00 irra eegalee
Bakka/Idoo: Spiel und Bildungszentrum Sendling
Danklstr. 34 (U3 “Station Implerstrasse”)
U-Bahn Station Implerstrasse U3 & U6